FAQ / प्रश्नोत्तर – बोष्टन सप्ताह २०१७ — Boston Saptaha 2017
बोष्टन सप्ताह २०१७ — Boston Saptaha 2017
बोष्टन सप्ताह २०१७
Welcome / नमस्ते
Program / कार्यक्रम
Schedule / कार्यतालिका
FAQ / प्रश्नोत्तर
Signup / दर्ता
नेपाली सामुदायिक केन्द्रको आवश्यकता किन पर्‍यो?
हामीले यो ठाउँमा स्थाइ बसोवास गर्न थाले पछि हामी हाम्रो आफ्नो पहिचानको लागि आफ्नो कला, संस्कृति, चाडपर्व अनि धर्मको संरक्षण गर्ने आवश्यक छ। यसका लागि हामी हरुको आफ्नो सामुदायिक केन्द्र हुन आवश्यक छ जसमा हामी आफ्नो चाडबाड मनाउन जम्मा हुन सकौं, विवाह, ब्रतबन्ध, पूजाआजा, सार्वजनिक कार्यक्रम, भेटघाट आदि सजिलै सँग गर्न सकौं।
बोस्टन सप्ताह २०१७ मा संकलित दान के कार्यको लागि प्रयोग गरिने छ?
बोस्टन क्षेत्रमा नेपालीहरुको सामुदायिक केन्द्र स्थापना गर्ने उद्देश्यले पशुपतिनाथ बुद्ध फाउण्डेशन ले केही वर्ष यता देखि विभिन्न कार्यक्रम हरु गरेर चन्दा संकलन गर्दै आएको छ। तर केन्द्र स्थापनाका लागि ठूलो रकमको आवश्यकता परेको हुनाले बोस्टन सप्ताह आयोजक समितिले यो आध्यात्मिक महोत्सव आयोजना गरेर भक्तजनहरू बाट प्राप्त दान सामुदायिक केन्द्र स्थापना गर्न फाउण्डेशनलाई हस्तान्तरण गर्नेछ।
सप्ताह आयोजना गर्ने खर्च कहाँबाट आउँछ?
यो महायज्ञ सम्पन्न गर्न न्यू ईङ्गल्याण्डमा बसोबास गर्ने नेपालीहरूले एक आयोजक समिति बनाएका छन्। यस समितिका सदस्यहरूले कार्यक्रम आयोजना गर्न लाग्ने खर्च चन्दा मार्फत जम्मा गरिएको छ। सामुदायिक केन्द्र स्थापनाको लागि संकलन गरिएको रकम अन्य काममा खर्च हुने छैन।
सप्ताह आयोजनाको व्यवस्थापन कसरी गरिंदै छ?
सप्ताह व्यवस्थापनको लागि १ हजार १ सदस्यीय एक मूल समिति बनिरहेको छ। त्यस समितिको अन्तरगत मुख्य मुख्य कामको आधारमा उप-समितिहरू बनाईएका छन्। हरेक उपसमितिमा विभिन्न पेशामा काम गर्ने व्यक्तिहरू स्वयं सेवकको रूपमा काम गर्दछन्। समितिमा सहभागी भएर यस महान काममा सघाउनको लागि सबैजनालाई आह्वान गर्दछौँ। अनुष्ठान सेवा लिन तथा स्वयंसेवक भएर सेवा दिनको लागि यहाँ जानुहोस्।
म पनि स्वयं सेवक भएर मद्दत गर्न सक्छु?
सप्ताहको अवधिभरि र त्यो भन्दा पहिलेपनि हामीहरूलाई थुप्रै जनशक्तिको आवश्यकता पर्दछ। स्वयं सेवकको रूपमा मद्दत गर्न चाहनुहुन्छ भने यो फारम भरेर मा हामीलाई सम्पर्क अनुरोध गर्दछौँ।
दान कसरी दिने ?
हामीहरू नगद, ब्याङ्क चेक तथा क्रेडिट कार्ड मार्फत दान लिन सक्छौं । तपाई यो वेबसाईटको PayPal लिंक प्रयोग गरेर पनि दान दिन सक्नुहुन्छ। हरेक दाताहरूलाई हामी भर्पाई उपलब्ध गराउने छौं।
भागवत् कथाको महत्व